कोमल ओलिको पि’डुलाको कुरा गर्ने रघुजीले अरुको त के के हेर्नु हुन्छ होला ? कोमल हाम्री चेली हुन भन्दै आयो यस्तो भिडियो हे’र्नुहोस्
Homeसमाचारकोमल ओलिको पि’डुलाको कुरा गर्ने रघुजीले अरुको त के के हेर्नु हुन्छ होला ? कोमल हाम्री चेली हुन भन्दै आयो यस्तो भिडियो हे’र्नुहोस्
March 2, 2021 admin समाचार 3313
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नि’कट राष्ट्रिय सभाकी सांसद कोमल वली नेकपा नेता र’घुजी पन्त वि,रुद्ध अदालत जाने भएकी छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षका नेता पन्तले उनी लक्षि’त दिएको अभिव्यक्तिले चरित्र ह,त्या भएको ज’नाउँदै वली न्यायका लागि अदा’लत जाने भएकी हुन् ।
वलीले अ’दालतमा मुद्दा दायर गर्ने बताएकी छन् । जिल्लाले सिफारिस गरेर राष्ट्रिय सभा स’दस्य बनेको उनले दाबी गरिन् । प्रदेश कमिटीले गरेको नाम सिफारिसलाई स्थायी कमिटीले अ’नुमोदन गरेपछि सांसद बनेको उनले सुनाइन् ।
उनले भन्निन्,‘केपी ओलीले टप’क्क टिपेर मलाई सांसद बनाउनुभएको होइन । अर्को कुरा केपी ओलीले सबै कार्य’कर्तालाई माया नै गर्नुहुन्छ । त्यसमध्येको म पनि एउटा पर्छु।’ कोमल ओलीले ट्वीटरमार्फत पन्त नि,च भएको आ,रोप ल’गाएकी छन् । एक कार्यक्रममा नेता पन्तले पो,इला जान पाम भन्दै पि,डुला देखाएको भरमा सां’सद भएको अभि’व्यक्ती दिएका थिए । – इताजा खबरबाट
”माया मारेर” गीतमा डान्स गरेर सबैलाई रूहा’एकी ज्योति मगरको अन्तरबार्तामै चल्यो रु’वाबासी (भिडियो सहित)
गायिका आस्था राउत बिहे गर्ने त’यारीमा, को हुन त हुनेवाला श्रीमान् ?
February 3, 2021 admin समाचार 4561
अहिले कला’कारहरुको धमाधम विवाह हुँदैछ । नायीका स्वेता खड्काले हालै विवाह गरिन् । अब गायिका अञ्जु पन्त विवाहको त’यारीमा छन् । उनको विवाहको लुगा पनि तयार हुँदै भन्ने समा’चार सार्वजनिक भएका छन् । यता अर्की
गर्मीले हैरान हुनुहुन्छ ? पानीमा मिलाएर पिउनुहोस् ५ चिज
August 24, 2020 admin समाचार 16479
गर्मीको समय, खान’पानमा विशेष ध्यान दिन सकिएन भने विभिन्न प्रकाकार स्वास्थ्य समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो स्वास्थ्य समस्या बाह्य (देखिने) र आन्त’रिक (नदेखिने) पनि हुन्छ । गर्मी समयमा खानपानमा ध्यान नदिँदा विभिन्न प्रकारका सरुवा
पोखरामा नायिका निता ढुंगानासँग प्रेम साट्दै गर्दा भेटिए ज्योतिषी हरिहर अधिकारी
December 22, 2020 admin समाचार 4593
नायिका निता ढुगाना यतिबेला ज्योतिषी तथा अभि’नेता हरिहर अधिकारीसँग निकै न’जिक छिन् । अधिकांश समय हरि’हरकै छेउछाउमा देखिने यि सुन्दरीले हरिहरसँग माया प्रेम सा’ट्दै बनाएका टिकटक भिडियोहरु अहिले भा’इरल बनिरहेका छन् । अभिनेता आमेष भण्डारीसँग
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (206321)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (205974)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (170199)